I-Alchemy Post Sound Iphakamisa I-Foot Yona Eyona Ngcono Ekuhambiseni I-Foley ye-FX "I-Fosse / iVerdon" -I-NAB ibonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcast of Broadcasting yeNAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » I-Alchemy Post Sound Yenza I-Foot Foot Yayihamba Ngayo Ekukhuliseni I-Foley yeFX "I-Fosse / Verdon"
I-Alchemy Post Sound Yenza I-Foot Foot Yayihamba Ngayo Ekukhuliseni I-Foley yeFX "I-Fosse / Verdon"
Iingcali zeFoley zisebenzisana nabaCwangcisi beeNgcaciso zeDream Daniel Timmons kunye noTony Volante ngokuphindaphinda izandi zoLwazi olubanzi kunye nefilimu eboshwe yi-choreographer kunye nomculi womculo.
IWestchester, eNew York- I-Alchemy Post Sound igqoke izicathulo zayo (kunye nezinye izinto ezininzi) ekudaleni umsindo we-Foley Fosse / VerdonI-series ye-FX ekhankanyiweyo ngokukhawuleza ngokuphathelele umculi wezobuchwephesha uBob Fosse (uSam Rockwell) kunye nomqabane wakhe nomfazi, umculi / udansa uGwen Verdon (Michelle Williams). Ukusebenza phantsi kolawulo lokusingatha abahleli bezandi uDaniel Timmons kunye noTony Volante, umculi weFoley uLeslie Bloome kunye neqela lakhe benza kwaye babhala amanqaku emisindo yesiqhelo ukuxhasa ukulandelelana komdaniso wokuzonwabisa kunye nokudibanisa iimeko eziyimpumelelo.
Ukuchitha iminyaka emihlanu, Fosse / Verdon uhlolisisa ubudlelwane obunothando kunye nobunye phakathi koBob Fosse noGwen Verdon. Umntu wokuqala wayengumbono umenzi wefilimu kunye nomnye wabadlali abachaphazelekayo kumabonakude kunye nabaqondisi, ngelixa lo mva waba ngumdaniso omkhulu we-Broadway kuwo onke amaxesha.
I-FOSSE VERDON - Ikhethwe: (lr) UMichelle Williams njengoGwen Verdon, uSam Rockwell njengoBob Fosse. I-CR: Pari Dukovic / FX
Ukunikezelwa kwesihloko, akukumangalisi ukuba isandi sokuveliswa kwemveliso sasiyinxalenye ebalulekileyo kulolu chungechunge. Ngenxa yeziganeko zayo zomculo, iTimmons kunye neVolante babenomsebenzi wokubethelela iibhedi ezivakalayo ezichanekileyo ukuze bafanise ukuchithwa kwezinto kunye nokudibanisa ngokuzimeleyo ngamanqaku. Kwakhona zakha izandi ezininzi ezibuyiselwayo ukuze zibuyiselwe kwiindawo ezihlukeneyo zeefilimu kunye nezigaba ze-Broadway, kwakunye nezinye iindawo ezingaphandle nangaphakathi.
Ukuxubusha umxube weprojekthi womculo kunye nomdlalo wembonakaliso kubangele imingeni ebalulekileyo yokudala kodwa kunye nethuba elikhethekileyo. "Ndakhulela eNew York kwaye ndithembele ekusebenzeni ngokuvakalayo, mhlawumbi kwi-Broadway," ukhumbula. "Ngalo mboniso, ndafuneka ndisebenze kunye nabaculi abazenzayo kweli lizwe kwizinga eliphezulu. Kwakungabonakali kakhulu kumabonwakude njengomxube womculo we-Broadway, abameli be-Broadway kunye nomabonwakude. Kwakumnandi ukusebenzisana nabantu abasebenza phezulu kwimidlalo yabo. "
I-crew yakrazula ukuxuba okungaqhelekanga kwemithombo ekuhlanganiseni isandi. Iimpawu zibonisa ukuba, ukuphindaphinda ukukhwehlela kwe-Fosse (isibonakaliso sokusebenzisa kwakhe imichiza yonyango), bathululela kwiimpawu ezivakalayo kwifilimu ye-1979 yakudala Yonke loo Jazz. "URoy Scheider, owayedlala uBob Fosse ngokuguqula i-ego kule filimu, akazange akwazi ukukhwehlela njengaye, ngoko uBob wangena kwi-studio yokurekhoda waza wenza ukukhwehlela ngokwakhe," kusho uTimmons. "Saphelile sisebenzisa ezo rekhodi ezidala kunye ne-ADR yeSam Rockwell. Xa impilo kaBob iqala ukuya ngasezantsi, ezinye zokukhwehlela oziva ngayo empeleni. Mhlawumbi ndikholelwa inkolelo, kodwa mna ndikuncede ukumbamba. Ndandiziva ngathi umoya kaBob Fosse ukhona apho. "
Inxalenye enkulu yeempembelelo zomsindo zithuba zenziwe yi-Alchemy Post Sound. Okugqithiseleyo, abaculi beFoley bavelisa ngokukhawuleza amanqanaba omdaniso. Ukudansa u-Foley kumdaniso kunokuvalelwa kulo lonke uchungechunge, kungekhona nje ekulandeleni komculo, kodwa nakwezinye iinguqulelo. "UBob Fosse waqala ukuqala njengomdanso we-tap, ngoko sasebenzisa izandi zengoma njengemifanekiso," kuchaza iTimmons. "Uvava xa singena kunye nangaphandle kwee-flashbacks kunye ne-monologues yangaphakathi." Kunye neBloome, iqela le-Alchemy libandakanya umculi weFoley uJoanna Fang, abaxube be-Foley uRyan Collison no-Nick Seaman, kunye no-Foley ongumncedisi uLaura Heinzinger.
Okumangalisayo kukuba, i-Alchemy kwafuneka ikhuphe ukuhambisa izandi "ezazigqibeleleyo kakhulu." UFang ubonisa ukuba iziboniso ezibonisa ukuvulwa komculo kwiifilimi zazibhekiselelwe ekumele zibonakalise ukuveliswa kwezi ziqendu kunokuba ziveliswe kwimveliso yokugqibela. "Sasiqaphele ukuba sibandakanye izandi zemvelaphi ezaziyobe zihlelwe ngaphambi kokuba ifilimu ihanjiswe kwiivenkile," kuchaza, wongezelela ukuba ezo ziqendu nazo zazifuna ukuba uFoley alinganise ukunyakaza komzimba kunye nabathengi. "Sichitha ixesha elide sijonge umgca omdala weBob Fosse ethetha ngomsebenzi wakhe, kwaye ukuba wayengazi nje nje ngeendlela zokudada, kodwa ukukhwaza kwabo kunye nolwimi lwabo. Le nxalenye yento eyenza ubugcisa bakhe buhluke. "
I-FOSSE VERDON "Ubani Ubunzima" Isiqendu 2 (ii-Airs ngoLwesibili, ngo-Aprili 16, 10: 00 pm / ep) - Ukhethwe: (lr) Sam Rockwell njengoBob Fosse, uMichelle Williams njengoGwen Verdon. I-CR: Eric Liebowitz / FX
Imveliso yeFoley yayibambisana ngokungaqhelekanga. Iqela le-Alchemy lugcina intetho yocwangciso kunye nabahleli bezandi kwaye behlala bechitshana kunye nokucoca izinto ezizodwa. "Sazi ukuba singene kwiinkquthela esasidinga ukuvelisa umlingo ekulandeleni umdaniso," ukhumbula umshicileli uFoley umhleli uJonathan Fuhrer. "Ndathetha kunye no-Alchemy imihla ngemihla. Ndathetha noRyan noNick malunga neentambo esizijolise kuzo kunye nendlela abaza kudlala ngayo ekuxubeni. ULeslie noJoanna babenemibono nemigqaliselo eninzi; Andizange ngimangaliswe ngcamango abayifake kwimisebenzi, iinkonzo, izicathulo kunye neendawo. "
I-Alchemy nayo isebenza kanzima ukufezekisa izinto ezibonakalayo ekudaleni izandi ezingezizo zomculo. Oko kwakuquka ukulandelela phantsi iiprogram zokudibanisa uluhlu lwexesha elifanelekileyo. Kwimifanekiso esetyenziswe kwigumbi lokuhlela ifilimu kwi-1950s, abasebenzi baseStenbeck abaneminyaka eyi-70 abanesigxina sokubamba izandi zabo ezizodwa. Njengoko ukulandelwa komculo kubandakanyeka ngaphezu kwethemputha yokudansa, abasebenzi baqokelela iqoqo lamakhulu amabini eembadada ukuze bafanise izihlangu ezigqithwe ngabenzi bomntu kwiindawo ezithile.
Ezinye izandi zithintela utshintsho olufihlakeleyo kwikhosi yechungechunge malunga nokuhamba kwexesha. "UBob Fosse unenkathazo kunye nezidakamizwa kwaye udla ngokubonakala ephethe unyango lokudandatheka," utsho uSaman. "Kwimifanekiso yokuqala, sabhala iipilisi kwi-glass flap, kodwa kwiimifanekiso kwiminyaka emva kamva, satshintshela kwiplastiki."
Ezi ziqhetseba zongeza ubuncwane kwisandi sokudlala kunye nokuncedisa udidi lwelo xesha, ithi iTimmons. "U-Alchemy uzalisekise zonke izicelo esizenzileyo, kungakhathaliseki ukuba zinjani," ukhumbula. "Inani leembadada ababezisebenzisa lalingenakwenzeka. Abaqhubi be-Broadway bavame ukugqoka izicathulo kunye neengcambu ezincinci ngexesha lokuziphendulela kunye nezicathulo ezinamaqatha amaninzi xa zifika kumboniso. Imiqolo engqongqo iyanzima. Ngoko, iqela laseFoley lalihlala linenyameko lokukhetha izicathulo ezifanelekileyo ngokuxhomekeka kwinqanaba lokuphindaphinda ekubonisweni. Ukuchaneka. "
Inzame eyongezelelweyo nayo yabangela uFoley odibanisa lula kunye nezinye izinto ezivakalayo, ingxoxo kunye nomculo. "Ndiyathanda umsebenzi we-Alchemy ngoba inomsindo wangempela, wemvelo kunye ovulekile; akukho nto izandi ezandiwayo, "iphetha i-Timmons. "Kuzwakala ngathi igumbi. Iyakwandisa ibali nokuba ngabaphulaphuli abayiqondi ukuba ikhona. Ulungile uFoley. "
I-Alchemy Post Sound iyinyawo lesigxina se-3,500, studio ye-Foley eyazinikezelwa ngokukhethekileyo kuFoley ngumhlali waseFoley uMnumzane Leslie Bloome. Abasebenzi be-Emmy Award-win-winning company baye badala isandi seenqabileyo ezinkulu zefilimu, iindidi zethelevishini ezide, iifilimu ezizimeleyo kunye nemidlalo ethandwayo. Iinkonzo ze-Alchemy ziquka ukurekhoda komculo, ukusebenza komsebenzi, ukuveliswa kwevidiyo, i-ADR, kunye noyilo lwezandi.
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida ukuhlela Foley UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli SJGolden - Isandi Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji	2019-07-10
Previous: I-Soularity Sound Relies kwi-NUGEN Audio kwiiRadio-Solid Products kunye neNkonzo yoMthengi
next: Ukuphakama kweeNtsuku zeeNtshukumo ukuya kwelinye inqaku kunye ne "Spider-Man: kude nekhaya"